NEWS Archives - Page 8 of 13 - SANTHITSA
သီတဂူ ဘုန်းဘုန်းကြီး ကျေးဇူးအံ့မခန်း . . .
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် သီတဂူ ဘုန်းဘုန်းကြီး ကျေးဇူးအံ့မခန်း . . . သီတဂူဆရာတော်ဘုရားဟာ ကိုဗစ်ကာလမှာ အိန္ဒိယကနေ ရဟန်းတော်တွေကို မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။Q ဝင်နေတုန်းမှာလည်း လိုလေသေးမရှိ စောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါ။ခုဘုန်းဘုန်းကြီး၏ မေတ္တာကျေးဇူးအကြောင်းလေးကို ခုလိုလူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယနေ့ Q-ဝင်နေကြသည့် ပြည်တော်ပြန် ရဟန်းငယ်များ ၂၁ ရက်ပြည့်၍ ပြန်ခါနီး ဆရာတော်ထံ သွား၍ဦးခိုက်ကြ ဝတ်ပြုကြသည်။တစ်ပါး တစ်ပါးလျှင် US ဒေါ်လာ 250 နှင့် မြန်မာငွေ ကျပ် ၂ သိန်းစီ ဆက်ကပ်သည်။တပည့်တော်တို့အပေါ်ဖခင်အရင်းပမာ ကောင်းကောင်းထားပေး။ ကောင်းကောင်းကျွေး။အခု ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့နဝကမ္မက ပေးသေးတဲ့ ကျေးဇူးတွေတပည့်တော်တို့ တစ်တွေဘယ်တော်မှမေ့မည်မဟုတ်ပါဘုရားတဲ့။သီတဂူဆရာတော်ကဒုက္ခရောက်နေသူကာယကံမြောက်ကူညီစောင့်ရှောက်ခွင့်ရ၍ ငါကတော့ ပျော်တယ်တဲ့။ သဗ္ဗေ ဘဒြာနိ ပဿန္တုအကောင်းမြင်ဝါဒ …
“မိန်းမရေ.. မောင့်အစားဝင်ခံပေးသွားတာလားတဲ့..” မိုးတွင်းမှာ ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း သတိထားကြဖို့ တင်ပေးတာပါ
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် “မိန်းမရေ.. မောင့်အစားဝင်ခံပေးသွားတာလားတဲ့..” မိုးတွင်းမှာ ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း သတိထားကြဖို့ တင်ပေးတာပါ သတိထား ရှောင်ကြဉ်စေချင် လို့ တင်တာပါ ၊စိတ်မကောင်းပါဘူး စဉ့် ကိုင်နယ်ဘက်က မိုးရွာတဲ့ အချိန် လမ်းမှာခဏမိုးဝင်ခိုရင်းဖုန်းဝင်လာလို့ ကိုင်လိုက်တာ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိပြီး ၂ယောက် မိုးကြိုးထိပြီးသေသွားတာပါတဲ့ ၊ မိန်းကလေးချောချောလှလှ ငယ်ငယ်လေးနော်၊ မြန်မာပြည် ရွာဘက်တွေမှာ ခဏခဏကြားရတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ် ၊မိုးခြိမ်းလျပ်စီးလက်တာနဲ့ ဖုန်း ပါဝါပိတ်ထားကြပါ ၊မိုးရာသီရောက်တော့မယ် အထူးသတ်ိပြုကြပါနော် Credit #Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် “မိနျးမရေ.. မောငျ့အစားဝငျခံပေးသှားတာလားတဲ့..” မိုးတှငျးမှာ ဖုနျးကိုငျသူတိုငျး သတိထားကွဖို့ တငျပေးတာပါ သတိထား ရှောငျကွဉျစခေငျြ လို့တငျတာပါ ၊စိတျမကောငျးပါဘူး စဉျ့ကိုငျနယျဘကျက မိုးရှာတဲ့အခြိနျ လမျးမှာခဏမိုးဝငျခိုရငျးဖုနျးဝငျလာလို့ကိုငျလိုကျတာ မိုးကွိုးစကျကှငျးမိပွီး ၂ယောကျ …
ဖုန်းသုံးစွဲနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်ချရာမှ မီးလောင်သေဆုံး
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုန်းသုံးစွဲနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်ချရာမှ ပွဲချင်းပြီး မီးလောင်သေဆုံး ယနေ့ ၁၃.၅.၂၀၂၀.မွန်းလွဲ၂:၂၀အချိန်မြဝတီမြို့နယ်၊မဲပလဲ့ကျေးရွာအုပ်စု ထီးချားရားရွာတွင်(၂၅)နှစ် အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖုန်းသုံးစွဲနေရင်း လျှပ်စစ်မိုးကြိုးပစ်ချရာ သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းသိရသည်။ သေဆုံးသူ တစ်ကိုယ်လုံး မီးလောင်ဒဏ်ရာရလို့ မဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကူးယူရေးသား တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ Credit ဘီဝမ်း #Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုနျးသုံးစှဲနစေဉျ မိုးကွိုးပဈခရြာမှ မီးလောငျသဆေုံး ယနေ့ ၁၃.၅.၂၀၂၀.မှနျးလှဲ၂:၂၀အခြိနျမွဝတီမွို့နယျ၊မဲပလဲ့ကြေးရှာအုပျစု ထီးခြားရားရှာတှငျ(၂၅)နှဈ အရှယျအမြိုးသမီးတဈဦး ဖုနျးသုံးစှဲနရေငျး လြှပျစဈမိုးကွိုးပဈခရြာ သဆေုံးသှားကွောငျး သတငျးသိရသညျ။ သဆေုံးသူ တဈကိုယျလုံး မီးလောငျဒဏျရာရလို့ မဖျောပွခွငျး ဖွဈကွောငျး ကူးယူရေးသား တငျဆကျလိုကျပါသညျ။ Credit ဘီဝမျး
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ပုံမှန်ထက်(၃) ဆ ပိုကျနေတဲ့ မီတာခကို တွက်ကြည့်တော့မှ အောင့်သက်သက် ဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ် အမေ့အိမ်မှာ ခိုနားနေတုန်း မီတာစာရွက်ရောက်လာတော့ “အမေ သားခဏပေးအုန်း တွက်ကြည့်ဦးမယ်” ဆိုပြီး တောင်းယူလိုက်တယ်။ အရင် မတ်လတုန်းက သုံးစွဲတဲ့ယူနစ်စုစုပေါင်းက ၁၂၀ ယူနစ်၊ အခုဧပြီလကျတော့ သုံးစွဲယူနစ်က ၃၄၉ ယူနစ်၊ ယူနစ်က ပိုများလာတော့ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး မီတာစာရွက်မှာပါတဲ့ ယခုလဖတ်ချက်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ ၁၀၈၆ တဲ့။ ပြီးတော့ မီတာဆီ သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ၁၁၀၀ တောင်ကျော်နေပြီ။ အင်း ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ယူနစ်တွက်တာ မှန်တယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ဆောင်ရမယ့်ငွေပမာဏကိုကြည့်လိုက်တော့ သုံးသောင်းကျော်။ “အမေ သုံးသောင်းကျော်ကျတယ်ဗျ” လို့ လှမ်းပြောလိုက်တော့ …
အပူရှိန်မြင့်နေသောအချိန် ရေချိုးမိ၍ ဦးနှောက် သွေးကြောပျက်ကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် အပူရှိန်မြင့်နေသောအချိန် ရေချိုးမိ၍ ဦးနှောက် သွေးကြောပျက်ကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ဒီအချိန်မှာ အားလုံးသတိထားကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။အရှည်ကြီးတော့ မရေးပြတော့ပါဘူး။ ရာသီဥတု အရမ်းပူပြင်းလွန်းတဲ့အချိန်မှာ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ရေအရမ်းမချိုးကြဖို့တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ မော်လမြိုင်မြို့ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ အမျိုသမီးတစ်ဦး နေအရမ်းပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ပူအိုက်တဲ့ဒဏ် မခံနိုင်လို့ ရေချိုးလိုက် ရာမှ ရှော့ဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ကာ သေဆုံးခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ တာပါ။ ဆေးရုံပို့ချိန်တောင် မမှီခဲ့ပါဘူး။ သေဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ DB ကိုတော့ နေအိမ်မှပိန္နဲကုန်းသုသာန် အအေးခန်းသို့ မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ 09 784 784 199 – 09 785 785 …
(၅) နိုင်ငံ သံမဏိ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပေါ်ပုံ တွေ့ရှိချက်
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် (၅) နိုင်ငံ သံမဏိ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပေါ်ပုံ တွေ့ရှိချက် (၅) နိုင်ငံ သံမဏိညွှန့်ပေါင်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ တရုတ်ပြည်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပေါ်ပုံ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်…. ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ နယူးဇီလန်နှင့် သြစတြေးလျစသည့် အမေရိကန်အပါအဝင် ၅-နိုင်ငံ သံမဏိညွန့်ပေါင်းအုပ်စု၏ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အချင်းချင်း သတင်းဖလှယ်ချက်များအရ လက်ရှိကူးစက်ပျံ့ပွားလျှက်ရှိသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှာ တရုတ်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ မတော်တဆလွတ်ထွက်လာသည်ဆိုခြင်းထက် ဝူဟန်မြို့သားရိုင်းဈေးမှ အစပြုပုံရန် ပိုမိုသေချာကြောင်းဖော်ပြပါရှိသဖြင့် ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ပြောဆိုချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေသည် ဟု CNN က ယနေ့ရေးသားသည်။ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ မတော်တဆ လွတ်ထွက်လာသည်ဆိုခြင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပုံမရကြောင်း၊ သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်လာသည့် ဗိုင်းရပ်စ်က ဖြစ်လေ့ရှိသည့်အတိုင်း လူသို့ကူးစက်ပြီး၊ လူနှင့် တိရိစ္ဆာန်တို့ …
ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး စူပါ ပြိုင်ကား (၁၀) စင်း
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဒူဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး စူပါ ပြိုင်ကား (၁၀) စင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အမြန်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုး တွေးဖူးကြလား မသိဘူးရှင့်။ ဆိုလိုတာက အမှုအခင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာကို အချိန်တိုတွင်းမှာ အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အခြေအနေအမျိုးမျိုး ပေါ်မူတည်နေပေမယ့် အဓိက ကျတာကတော့ သွားလာရေးအတွက် ယာဉ်တွေက အခြေခံအကျဆုံး အချက်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော် …။ ဒူဘိုင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အသုံးပြုတဲ့ အမြန်ဆုံးပြိုင်ကားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ Aston Martin One-77 ဒီယာဉ်တွေထဲကမှ အသုံးအများဆုံးယာဉ်တွေက ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေလို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။ …
ဧရာဝတီမြေပဲဆီစက်ပိုင် သူဌေး ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ မြန်မာပြည်က ပဲဆီများ အခြေအနေ
ဧရာဝတီမြေပဲဆီစက်ပိုင် သူဌေး ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ မြန်မာပြည်က ပဲဆီများ အခြေအနေ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ရေးသင့်ပြီထင်လို့ရေး လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားသုံးဆီလောက ထဲကိုဓာတုအနံ့ မြေပဲဆီ၊နှမ်းဆီရောက်တာ 2012/13 ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသားလူငယ်တယောက်ဘာသာပြန်နဲ့အတူ အိမ်ရောက်လာပြီးနမူနာ ပုလင်းလေးတွေပြပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ဒါသည်စားသုံးသူကိုလိမ်လည်တာဘဲဖြစ် တယ်မလုပ်သင့်ဘူး လို့ပြောပြပါတယ်။ နောက်ဓာတုအနံ့ဖြစ်လို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ အနံ့ကပြင်းလွန်းတယ်၊လို့ပြောပြပါတယ် ၊သူ့ကတော့နမူနာ ပုလင်းငယ်၎ပုလင်း ထားပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်း FDA မှတာဝန်ရှိ သူတဦးကိုပြောပြပြီးနမူနာ ပုလင်းငယ်များကို FDA ရန်ကုန်ရုံးခွဲကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ဓာတုအနံ့မြေပဲဆီ အတုနှမ်းဆီအတုက တနိုင်ငံလုံး ပြန့်လို့နေပါပြီ၊ စားသုံးသူရေးရာမှာ ကျနော်စတင်ပါသည့် 2014 ခုနှစ်ကတည်းက အစည်းအဝေးတက်တိုင်း ဒီဓာတုအနံ့ရဲ့ဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးမှုကတဖြေးဖြေးကြီး လာပါပြီ၊အချိန်မီတားဆီးပေးဖို့ ပြောရင်းနဲ့ကို 2016/17 မှာ ဈေးကွက်ရဲ့ …
ဧဝရတ်တောင်( အမည်ကွဲအားဖြင့် ချိုမိုလန်းမားတောင် )ထူခြားဆန်းကျယ်မှု
ဧဝရတ်တောင်( အမည်ကွဲအားဖြင့် ချိုမိုလန်းမားတောင် )ထူခြားဆန်းကျယ်မှု ဧဝရတ်တောင်( အမည်ကွဲအားဖြင့် ချိုမိုလန်းမားတောင် ) သည် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး နေရာအဖြစ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် ၈၈၄၈မီတာ (၂၉၀၂၉ ပေ) မြင့်မားသည်။ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွင် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး နီပေါ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ(တိဗက်ဒေသ) တို့က တစ်ဖက်စီတည်ရှိသည်။ ဧဝရက်တောင်ထိပ်သည် နီပေါနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တိဘက်ဒေသ တို့၏ နယ်စပ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဧဝရက်တောင်ထိပ်သည် လူသားတို့အတွက် မလောက်ငှသော လေပမာဏ ရှိသည့် သေမင်းတမာန် လေထုဇုံ တွင် တည်ရှိသဖြင့် တောင်ထိပ်သို့ တက်ရောက်ရာတွင် အပို အောက်ဆီဂျင်ကို အသုံးပြုရသည်။ သေမင်းတမာန်ဇုံ ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ၂၅,၀၀၀ ပေ …
ကလေးအယောက် ၄၀ ကျော် မွေးဖွားထားသည့် အမျိုးသမီး နောက်ထပ်ကလေးမွေးဖွားခွင့်ပိတ်ပင်ခံရ
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ကလေးအယောက် ၄၀ ကျော် မွေးဖွားထားသည့် အမျိုးသမီး နောက်ထပ်ကလေးမွေးဖွားခွင့်ပိတ်ပင်ခံရ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာအကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ ကမ္ဘာ့ကလေးအများဆုံးမွေးနိုင်တဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Mariam Nabatanzi ကတော့အမှန်တကယ်ကလေး ၄၄ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့သူပါ(ဘောလုံးအသင်းနှစ်သင်းစာတောင်နော်)။ဒီကိစ္စဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ သင့်အနေနဲ့ မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ Mariam ဟာအသက်၁၃နှစ် အရွယ်မှာပထမဆုံး သားဦးအမွှာကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအသက် ၁၂နှစ် အရွယ်မှာအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တာပါ။Mariam ဟာနှစ်မြွှာပူး ၄ကြိမ်၊သုံးမြွှာပူး ၅ကြိမ်နဲ့ လေးမြွှာပူး ၅ကြိမ် အသီးသီးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ အသက်၄၀ရှိပြီး သူမရဲ့ခင်ပွန်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ထဲကသူမဘဝထဲကထွက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ယခုအချိန်မှာကလေး ၃၈ယောက်အားသူမရဲ့လက်အောက်မှာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပါတယ်။Mariam ကတော့မိသားစုကိုထောက်ပံနိုင်ဖို့တနေ့ကိုမတူညီတဲ့အလုပ်သုံးခုထိလုပ်ကာခက်ခဲစွာကြိုးစားရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့သူမဟာကလေးတွေအားလုံးကိုတော့ ကျောင်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။“သူတို့တွေဟာ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေနေရပေမယ့်၊ အားလုံးကတော့ကျောင်းသွားနိုင်ကြပါတယ်”ဟု Mariam မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာရဲ့ ပြောပြချက်မှာတော့ Mariam မှာ အမှန်တကယ်တော့ကြီးမားလွန်းလှတဲ့သားအိမ်ရှိပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ …